Uyilo lobhaka lwesikolo somfundi weTIGERNU
Amandla: Le bhegi yakudala yinguqulelo elula ye-T-B3032. Ubungakanani bayo yi-28.5 * 15 * 45cm (L * W * H), ilungele ilaptop ukuya kuthi ga kwi-15.6 ″, Amagumbi amabini aphambili kunye neepokotho ezimbini zangaphambili zibonelela ngendawo eyoneleyo yazo zonke iimfuno zakho zemihla ngemihla kwaye ugcine ubhaka wakho ucocekile kwaye ucocekile. Ipokotho yecala enemigca emibini ilungele isambrela sakho kunye nebhotile yamanzi. Enye efihliweyo ngasemva epokothweni yobusela ilungile kwifowuni yakho kunye nezinye izinto zexabiso.Isixhobo: Le nto ibhegi yelaptop ayisebenzi kwaye ayikrweli i-ocford engagungqiyo, ehlala ixesha elide kunye ne-eco-friendly.I-zipper ephambili yi-TIGERNU enelungelo elilodwa lomenzi elitshixwayo, elomeleleyo, eligudileyo ukusetyenziswa kwaye likhuseleke ngakumbi kwizinto zakho.Izinto: Le ubhaka ngumthamo omkhulu, ofanelekileyo kuzo naziphi na iinjongo. Ubhaka unesiphatho esiqinisiweyo kunye nelinye igxalaba elilungelelanisiweyo.I-Ergonomics kunye ne-S-shape padding straps straps ikhulula uxinzelelo emagxeni.Ibhanti yomthwalo olukwe kakuhle ikuvumela ukuba ubeke ubhaka wakho kwitroli yesutikheyisi yakho ngokulula.
Ngobukeka obuhle bobuchwephesha, amanqaku afanelekileyo, kunye neenkcukacha zokukhusela, umthamo omkhulu weTigernu ubhaka ulingana nendlela osebenza ngayo.
Ingxowa yomfundi yesikolo yaseTIGERNU
Obu bhaka wesikolo buyi-28 * 15 * 41cm okanye i-30 * 18 * 47 (L * W * H), enegumbi elinye eliphambili kunye nomkhono welaptop olungele ilaptop ukuya kuthi ga kwi-15.6inch, igumbi elinye elingaphambili elinemingxunya emincinci emininzi, amacala amabini Olu bhegi lubanzi kuzo zonke iincwadi zakho, incwadi yokubhalela, umnxeba, ibhanki yamandla, iintambo njalo njalo.
Yenziwe nge-polyester ekumgangatho ophezulu kwaye inemibala emi-5, iyahlangabezana neemfuno ezahlukeneyo.Uziphu ophambili nguTigernu onelungelo lokushicilela elinamalungelo amabini elinokutshixwa ngeendlela ezimbini, ubungqina bokuqhushumba, ukuhlala ixesha elide kwaye kukhuselekile. ubomi bakho bemihla ngemihla.
Le bhaka ilungele nawuphi na umsitho, isikolo, ukuyokuthenga, ukudibana ngeempelaveki, ishishini, ukuhamba, uhambo olufutshane njalo njalo. Khetha ubhaka kaTigernu, qalisa ukusebenzisana ngokuphumelela.
Uyilo lwakudala lwelaptop yeTIGERNU
Amandla: Le bhegi yakudala yinguqulelo elula ye-T-B3032. Ikwanobukhulu obubini, ubungakanani obunye ngama-29 * 14 * 44cm (L * W * H), ilungele ilaptop ukuya kuthi ga kwi-15.6 the, obunye ubungakanani bungu-31 * 17 * 48cm (L * W * H), ilungele ilaptop Ukuya kuthi ga kwi-17 ″ .Amagumbi amabini aphambili kunye neepokotho ezimbini zangaphambili zibonelela ngendawo eyoneleyo yazo zonke iimfuno zakho zemihla ngemihla kwaye ugcine ubhaka wakho ucocekile kwaye ucocekile.Ukwakha kwisingxobo seelaptop kufakwe kakuhle. Enye efihliweyo ngasemva epokothweni yobusela ilungile kwifowuni yakho kunye nezinye izinto zexabiso.
Isixhobo: Le nto ibhegi yelaptop ayisebenzi kwaye inqabile nenayiloni enganyangekiyo, yomelele, ihlala ixesha elide kwaye inobuhlobo.
Izinto: Le ubhaka ngumthamo omkhulu, ofanelekileyo kuzo naziphi na iinjongo. Ubhaka unesiphatho esiqinisiweyo kunye nelinye igxalaba elilungelelanisiweyo.I-Ergonomics kunye ne-S-shape padding straps straps ikhulula uxinzelelo emagxeni.Ibhanti yomthwalo olukwe kakuhle ikuvumela ukuba ubeke ubhaka wakho kwitroli yesutikheyisi yakho ngokulula.
Ingxowa ye-Crossbody Bag T-L5200
I-TIGERNU ukufika okutsha komgangatho ophezulu wengxowa yomntu ophetheyo
Umbono womyili kuyilo lwebhegi yomthunywa kukwenza ubomi bamadoda bube lula
Ubukhulu: 20.5 * 7 * 27cm (L * W * H) .Ipokotho ezineziphu ezine, zonke iimfuno zakho zemihla ngemihla ezinje nge-iPad, iselfowuni, iipeni, ibhanki yamandla, iselfowuni, izitshixo, isipaji, zinokucwangciswa ngokulula.
Iimpawu: Yenziwe ngoxinano oluphezulu lokutshiza kunye nenayiloni enganyangekiyo njengempahla ephambili kunye ne-210D polyester lining. ubungqina
Kukwalula kakhulu ubunzima bomthamo omkhulu.Ukukhetha okuhle emsebenzini, esikolweni, kwezemidlalo nakwibhayisekile.
TIGERNU uyilo olutsha lwamadoda amadoda ubhaka
Umthamo omkhulu kunye nobhaka ohlelwe kakuhle: Ubungakanani bayo yi-31 * 17 * 48cm (L * W * H). Igumbi elikhulu elikhulu elineepokotho zangaphakathi ezili-10 zilungele iipilisi, iipeni, iifowuni, iincwadi, iimpahla; ipokotho ekhethekileyo yebhanki yamandla. Igumbi elingaphezulu elingaphezulu kwizipili zakho. Iipokotho ezisecaleni ezi-2 kunye negumbi eli-1 langaphambili le-zipper kwibhotile yakho yamanzi, isambrela, incwadana yokubhalela kunye nezinye izinto ezincinci. Ukwenza ubhaka wakho uhlelwe.
Izinto ezikumgangatho ophezulu Ezi ndlela zimbini zivula i-Tigernu uziphu, kulula ukufikelela kuyo kunye nobungqina bokuqhushumba kwaye kulula ukuyisebenzisa.
I-Port yangaphandle yokutshaja i-USB: I-TIGERNU i-USB yokutshaja ubhaka ngentambo efumanekayo ye-USB ikunika indlela elula ngakumbi yokutshaja ifowuni, ithebhulethi, njl.
Ukuthuthuzela kunye nokuLungeleka: Ukuhamba komoya kunye nokuxinana okubunjiweyo kunye nemitya kukuvumela uzive ukhululekile nokuba uza kuthatha ixesha elide. Uyilo lwe-Ergonomics kunye nohlengahlengiso lwe-S-shape straps strap luhambelana nenkqubo yokunciphisa umthwalo we-ergonomic, ukusasazeka kwamagxa, umqolo, uxinzelelo lwe-lumbar. Ibhanti eboshwe kakuhle ilungele wena ukulungisa ibhegi yelaptop kwitroli yempahla yakho, ukwenza uhambo lwakho kunye nokuhamba lula naphi na apho uya khona. Iipokotho ezi-2 kwimitya yamagxa yezibuko zelanga kunye nekhadi
Ukhuseleko: Ubhaka weLaptop onepokotho efihlakeleyo yobusela ngasemva ukhusele izinto zakho zexabiso kumasela. Iiziphu eziphindwe kabini zinokutshixwa ngetshixo, ke awusoze ube nexhala lomntu oza kuba izinto zakho. Ukugcina izinto zakho zikhuselekile!
Wamkelekile ujoyine iTIGERNU ngentsebenziswano yokuphumelela
I-TIGERNU uyilo olutsha oluphezulu lwe-TPU crossbody bag
Yenzelwe ukusetyenziswa kwemihla ngemihla ngobukhulu obuncinci kodwa indawo eyoneleyo kwiimfuno zakho zemihla ngemihla Inobungakanani be-28 * 8 * 14.5cm (L * W * H), ibanzi ngokwaneleyo kwifowuni yakho, ibhanki yamandla, isipaji, i-ID, amakhadi , iintambo kunye neencwadana zokubhala njl Ngegumbi elinye eliphambili kunye nomphambili omnye kunye nomqolo omnye ongasemva, ungagcina izinto zakho zilungelelaniswe kakuhle.
Isixhobo se-TPU esingangenwa ngamanzi sikumgangatho ophezulu, kulula ukucoceka kwaye somile, singenawo mibimbi kwaye sihlala ixesha elide.Iziphu ziiTigernu ezenzelwe ilogo, ubungqina bokudubula kunye nokuhlala ixesha elide.
Ingxowa encinci, ubunzima bokukhanya kunye nokukhetha okuhle ukuphuma okanye ukuthandana. Imibala emibini ekhoyo, emnyama neblowu ukutshatisa ifashoni yakho.
Khetha iimveliso zikaTigernu, wenze ubomi obungcono.
Umnqamlezo Ibhegi TGN1004
I-TIGERNU smart ibhegi yokwenziwa kwesikhumba
Le bhegi yenziwe ngombala ophezulu wenkomo, uthambile kwaye uyaphefumla.Uyilo lukhetheke ngokukodwa, igumbi elinye eliphambili kunye neflap enomhombiso wehardware ngaphambili. Inamandla amakhulu kunye nokhuseleko kuhambo lwakho lwemihla ngemihla.
Umtya wegxalaba uhlengahlengiswa kuyilo lwe-ergonomics, ukunceda ukunciphisa uxinzelelo kunye nokukhululeka ukunxiba.
Yinto elungileyo ukukhetha crossbody ibhegi kubomi bakho bemihla ngemihla okanye isipho kubahlobo bakho okanye obathandayo.
Ukubuyela umva TGN1003
Tigernu uyilo lokuqala ubhaka wesikhumba
Le bhegi yenziwe ngombala ophezulu wenkomo, uthambile kwaye uyaphefumla.
Uyilo lukhetheke ngokukodwa, igumbi elinye eliphambili kunye neflap enomhombiso wehardware ngaphambili. Inamandla amakhulu kunye nokhuseleko kuhambo lwakho lwemihla ngemihla.
Kukhethwa ubhaka wobomi bakho bemihla ngemihla okanye isipho kubahlobo bakho okanye obathandayo.
Umnqamlezo Ibhegi TGN1002
Umgangatho ophezulu we-TIGERNU wekhwalithi ephezulu yesikhumba somntu
Ingxowa inobungakanani be-17 * 16 * 10cm, enegumbi elinye eliphambili kunye neepokotho ezimbini ezingaphambili, iyanceda ukugcina izinto zakho zilungelelaniswe kakuhle.
Izinto ezisetyenzisiweyo sisikhumba sophahla oluphezulu, sithambile kakhulu kwaye siyakhazimla kwaye siyomelela ukusebenzisa. Iiziphu ziyi-proof-proof kwaye zilula ukuyisebenzisa. Umbala okhanyayo ngombala obomvu wenza le bhegi ibe yefashoni ngakumbi kwaye ipholile.
Umtya wegxalaba uhlengahlengiswa, ufanelekile nakuphi na ukuphakama kwabantu. Ikwanokusetyenziswa njengengxowa yesilingi kunye nebhegi yomnqamlezo ngaxeshanye.
Khetha ibhegi kaTigernu, khetha ubomi obukumgangatho.